Barcelona iyo Juventus oo diyaar u ah inay Man Utd ka fara maroojistaan Vidic. - Caasimada Online
Home Warar Barcelona iyo Juventus oo diyaar u ah inay Man Utd ka fara...
Barcelona iyo Juventus oo diyaar u ah inay Man Utd ka fara maroojistaan Vidic.
Mustaqbalka Nemanja Vidic ee Manchester United ayaa shaki ku jiraa mar kale iyadoo kooxda reer Spain ee Barcelona iyo kooxda heysata horyaalka Italy ee Juventus ay isku deyayaan inay kabtanka ka dhaqaajiyaan gegeda Old Trafford, sida uu qoray warsidaha The People.
Labada kooxdood ayaa maanka ku haya inay ninka reer Serbia ka dhaqaajiyaan horyaalka Ingiriiska dhamaadka xilli ciyaareedkan, xitta hadii uu kusii jiro xaaladiisa dhaawaca ah.
Dhamaadla xilli ciyaareedka Vidic ayaa heshiiskiisa waxaa ka harsanaan doona hal sano, waxaana nasiib darro noqon doona inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa.
United, ayaa dhibaato kala kulmeysay laba sano ka hor iyadoo Real Madrid ay xiiseyneysay ninkaan, waana inuu go’aan qaata 30 jirkaani hadii uu qandaraaska dhereynayo iyo hadii kale, kaasoo todobo isbuuc oo kale garoomada ka maqnaanaya.
Barcelona ayaa raadineysa ninkii booska ka bedeli lahaa Carles Puyol, iyadoo Old Lady ay dooneyso inay iska dhisto daafaceeda dambe.
Barcelona ayaa daafacaan ku rabta 12 milyan oo ginni, halka ay Juventus ku rabo ku dhowaad 16 milyan oo ginni.